Voninahitra lehibe ho ahy ny miresaka amin’ny zatovovavy maherifon’ny Fiangonana. Hitanay ny fanajanareo ny fanekempihavanana nataonareo eo am-pandrosoanareo ao amin’ny fiainanareo, ary mahafantatra izahay fa ny fiainanareo am-pahamarinan-toetra dia hitahy ny razambenareo, ny fianakavianareo ankehitriny, ary ireo olona ao amin’ny fianakavianareo izay mbola ho avy, araka ny nambaran’ny Filoha Gordon B. Hinckley nanao hoe: “Mamonjy taranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray.”1
Nanomboka tamin’ny fotoana nahavitan’ny batisanareo sy nandraisanareo ny fanomezana ny Fanahy Masina ny lalan’ny fanekempihavananareo. Mitohy isan-kerinandro ao amin’ny fivoriana fanasan’ny Tompo izany, toerana masina iray izay hanavaozanareo ny fanekempihavananareo tamin’ny batisa. Ankehitriny ny fotoana hiomananareo hanao fanekempihavanan’ny tempoly. Ireo “ôrdônansy sy fanekempihavanana masina misy any amin’ny tempoly no mahatonga izany ho azo tanterahina ho [antsika] mba hiverenan[tsika] eo anatrehan’Andriamanitra sy ahafahan’ny fianakavian[tsika] ho iray mandrakizay.”2
Mitoera amin’ny toerana masina ho an’ireo razambenareo. “Ny olombelona rehetra izay tonga eto amin’ity tany eto ity dia vokatry ny taranaky ny ray aman-dreny maro. Manana faniriana ara-boajanahary ny hifandray amin’ny razambentsika isika.”3 Mampifandray akaiky ny fiainanareo amin’ny fiainan’ireo razambenareo ianareo rehefa mandray anjara amin’ny tantaram-pianakaviana sy ny asan’ny tempoly amin’ny fanatanterahana ireo ôrdônansin’ny famonjena ho azy ireo.
Mitoera amin’ny toerana masina ho an’ny tenanareo sy ny ankohonanareo. Ho loharanom-pifaliana lehibe ny ohatra marina izay asehonareo na inona trangan-javatra eo amin’ny fianakavianareo. Hahamendrika anareo hanatanteraka sy hanaja fanekempihavanana masina izay hamatotra ny fianakavianareo hiaraka mandrakizay ireo safidy marina ataonareo.
Mitoera amin’ny toerana masina ho an’ny fianakavianareo ho avy. Manolora tena ny hofehezina amin’ny vadinareo amin’ny alalan’ny fisoronana masina any amin’ny tempoly rehefa hanomboka vondrom-pianakaviana mandrakizay iray ianareo. Hotahiana amin’ny fahamarinana ny zanakareo rehefa mandrary ny ohatra feno fahamarinan-toetra sy ny fijoroana ho vavolombelona tsy voahozongozona anananareo amin’ny fiainan’izy ireo ianareo ary mampiseho azy ireo ny làlana mankany amin’ny làlan’ny fanekempihavanana.
Hitako naseho tany amin’ny Fifaninanana ara-javakanto Eran-tany ho an’ny Tanora vao tsy ela akory izay ireto fitsipika mandrakizay ireto. Namorona sary iray i Megan Warner Taylor, izay maneho fomba fijery maoderina ny fanoharan’i Kristy ny amin’ireo virijiny folo.4 Nihaona tamin’i Megan aho, ary nazavainy ny dikan’ilay virijiny fahafolo, izay nofariparitany ho zatovovavy iray marin-toetra sy manam-pinoana, vonona ny hanatanteraka sy hanaja ireo fanekempihavanana masin’ny tempoly. Tahaka ireo virijiny hendry rehetra, ny fiomanany manokana dia tonga raha nampiany solika, indray mitete tsikelikely, ny fanalany, tamin’ny alalan’ny fiainana am-pahitsiana tsy tapaka. Tsikaritro ny randrana tsara tarehy teo amin’ny volony. Nanazava i Megan fa izany randrana izany dia maneho ny rarin’ny fiainana feno fahamarinan-toetra an’ity zatovovavy ity mankany amin’ny taranaka tsy voatanisa. Naneho ny rarin’ny fitiavany sy fanajany ny razambeny ny fehim-bolo voalohany, rarin’ny ohatra am-pahamarinana eo amin’ny fianakaviany ankehitriny ny faharoa, ary ny fehim-bolo fahatelo dia rarin’ny fiainany voaomana ho amin’ny fiainan’ireo taranaka ho avy.
Nihaona tamin’ny tovovavy iray hafa aho izay nandrary fiainana feno fahamarinana nankany amin’ny taranaka maro tamin’ny fiomanany ara-panahy aloha be.
Tamin’ny takarivan’ny Septambra mahafinaritra iray, dia tao amin’ny tempoly izahay sy vadiko, niandry fahafahana handray anjara tamin’ny ôrdônansin’ny tempoly. Niditra ny efitrano i Chris, namanay iray. Tena nahafinaritra ny nahita ity tovolahy ity, izay vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Rosia.
Raha kely sisa dia hanomboka ny fivoriana, dia nisy tovovavy mahafatifaty iray nipetraka teo akaikiko. Namirapiratra izy, nitsikitsiky, ary feno hazavana. Te hahafantatra azy aho ka nampahafantatra taminy ny tenako moramora. Nibitsibitsika ny fanampin’anarany izy hoe Kate, ary tadidiko ny anaran’ny fianakaviany izay fianakaviana iray nipetraka tany Michigan, toerana izay nipetrahan’ny fianakaviako taloha. Efa lehibe i Kate izay zanak’izy ireo vavy, ary vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Alemana dimy herinandro talohan’io.
Nandritra ny fivoriana dia niverimberina tao an-tsaiko ny hoe: “Ampahafantaro an’i Chris i Kate.” Najanoko tany izany eritreritra izany nanao hoe: “Rahoviana, aiza, ahoana?” Raha niomana ny handeha iny izahay dia nanatona mba hanao veloma i Chris ka nararaotiko izany. Nosintoniko i Kate ka hoy aho nibitsibitsika hoe: “Olona marin-toetra roa mila mifankafantatra ianareo.” Afa-po aho nivoaka ny tempoly fa nanatanteraka ny bitsika tao amiko.
Niresaka ireo fitadidianay ny fisedrana izay nitra